3 nke antivirus kacha mma maka Windows 10 | Akụkọ akụrụngwa
Windows 10 ewerewo akụkụ nke akụkọ ahụ n'ime izu ndị ikpeazụ a na nile di iche iche nke Nkuzi, ndụmọdụ na enyemaka ndị ọzọ na-abịa maka enyemaka mgbe anyị na-emegharị maka mmelite ọhụrụ dị ka nke a.
Dịka otu n'ime ihe kachasị mkpa bụ nchekwa, ọ na-atọ ụtọ mgbe niile ka anyị nwee antivirus bụrụ na ijiji. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịnọ na-enweghị mmemme nke ụdị a iji kwado usoro ahụ, ndị ọzọ na-ahọrọ ịlaghachi na otu ọ bụrụ na ndị ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ karịa ha. Nke a bụ mmemme antivirus atọ na - akwụghị ụgwọ nke ịnweghị ike ịhapụ maka Windows 10 gị.
1 Nchedo 360
3 Onye nchekwa Windows
A free antivirus bụ onye ọhụrụ wee nwee ike ịbụ a nke nzọ ndị kasị adọrọ mmasị maka Windows 10 kọmputa.
Ikekwe nkwadebe gị maara ihe maka ịdị njikere dị ka antivirus tupu mbata nke Windows 10 emeela ka anyị mata banyere ya ugbu a ma anyị etinyeghị onye ọzọ iji kwado usoro mmemme a site na usoro ndị a.
Mmemme nke pụtara ìhè kpuchido ịzụrụ n'ịntanetị ma nwee ihe niile anyị na-atụ anya n'aka otu ụdị a.
Nweta nbudata gị.
Otu n'ime ndị ochie nke ebe ahụ nwere gosipụtara ahụmahụ ha dị ka antivirus ị gaghị efunahụ saịtị gị dịka otu n'ime antivirus kacha mma maka Windows 10.
Ọ bụ ezie na ọ na-enye ya free nhọrọ, nke zuru oke na-eje ozi bụ isi mkpa, ọ nwere a na-akwụ ụgwọ nhọrọ na ọzọ atụmatụ. Anyị enweghị ike ichefu banyere nchedo ozugbo na atụmatụ ndị ahụ niile mere ka ọ bụrụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma dị ka antivirus.
Ebe nrụọrụ weebụ gị.
Onye nchekwa Windows
Ihe nzọ abụọ ahụ kwuru ha na-eme ihe niile dị mkpa Na-ọma-echebe, antivirus na ndị ọzọ obi mmemme na-agbalị sinik n'ime anyị ọhụrụ emelitere sistemụ.
Ma na nke enwere n'efu, ọ bara uru karịa ezuru. N'ezie ị maraworị ya nke ukwuu na nke a bụ Windows Defender, ngwa nke ghọrọ usoro na agbanyeghị na ọ naghị etinye mmelite niile nke ndị ọzọ nwere ụdị akwụ ụgwọ ha, adabara n'ụzọ zuru oke maka mkpa anyị dị mkpa n'ụdị ịkwụsị nje na ihe nkedo ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » 3 antivirus free nke ị gaghị echefu maka Windows 10 gị
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mma Chinese smartphones na ahịa na ị nwere ike ịzụta taa